Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.3.3 ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်
Peer-To-မူပိုင်ခွင့်မူပိုင်ခွင့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးကြိုတင်အနုပညာကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်တစ်ခုဖွင့်ခေါ်သံသည် ဖြစ်. , ဒါကြောင့်ပွင့်လင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထက်ပိုမိုခန့်မှန်းပြဿနာများအတွက်သုံးနိုင်တယ်ကွောငျးဖျောပွ။
မူပိုင်ခွင့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးတစ်ခက်အလုပ်ရှိသည်။ သူတို့ကအသစ်တီထွင်မှု၏ terse, lawyerly ဖော်ပြချက်ခံယူလျက်, ဖော်ပြထားသောတီထွင်မှုပါလျှင်ထို့နောက်ဆုံးဖြတ်ရမယ် "ဝတ္ထု။ " ဖြစ်ပါတယ်ဒါကယခင်ကဤတီထွင်မှု-သောဆပ်မယ်လို့၏ version ကိုဖော်ပြခဲ့ -a "ကြိုတင်အနုပညာ" ရှိ၏လျှင်, စစျဆေးသူဆုံးဖြတ်ရမယ် အဆိုပြုထားသောမူပိုင်ခွင့်မမှန်ကန်တဲ့။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်မူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့၌သူ၏စတင်တယ်သောသူအဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း၏ဂုဏ်အသရေရှိအဲလ်ဘတ်အမည်ရှိတဲ့မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူစဉ်းစားကြကုန်အံ့။ အဲလ်ဘတ်ကအမေရိကန်မူပိုင်ခွင့် 20070118658 တစ်ဦး "အသုံးပြုသူတို့၏-select လုပ်ပါစီမံခန့်ခွဲမှုတပ်လှန့် format ကို" အတွက် Hewlett Packard အားဖြင့်တင်သွင်းဗက် Noveck ရဲ့စာအုပ်ဝီကီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာကျယ်ကျယ်ဖော်ပြခဲ့တူတစ်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိနိုင်ကြောင်း (2009) ။ ဤတွင်လျှောက်လွှာကိုမှပထမဦးဆုံးပြောဆိုချက်ကိုင်:
"တစ်ဦးကကွန်ပျူတာစနစ်, comprising: တစ် processor ​​ကို; Processor ​​ကိုကွပ်မျက်ကြသောအခါအရာ, ယုတ္တိဗေဒညွှန်ကြားချက်အပါအဝင်အခြေခံ input ကို / output ကိုစနစ် (BIOS ကို), ရန် processor ​​ကို configure: တစ်ကွန်ပျူတာကိရိယာ၏အခြေခံ input ကို / output ကိုစနစ်တွင်ကိုယ်ကျိုးစမ်းသပ်မှု (POST) အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အာဏာကိုအစပျိုး; တစ်ဦးသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောစီမံခန့်ခွဲမှုတပ်လှန့်ပုံစံများကိုတင်ပြ; user interface ကိုအတွက်တင်ပြစီမံခန့်ခွဲမှုတပ်လှန့်ပုံစံများတဦးဖော်ထုတ် user interface ကိုမှတစ်ရွေးချယ်ရေး signal ကိုခံယူ; နှင့်ဖော်ထုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုတပ်လှန့် format ကိုနှင့်အတူကွန်ပျူတာစနစ် coupled ကိရိယာကို configure ။ "
ဒီမူပိုင်ခွင့်မှအဲလ်ဘတ်ဆုကို 20 နှစ်တွင်လက်ဝါးကြီးအုပ်အခွင့်အရေးကိုသငျ့သ​​ို့မဟုတ်ကြိုတင်အနုပညာရှိခဲ့ခဲ့သလဲ မြားစှာသောမူပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်လောင်းကြေးမြင့်မားသော်လည်း, ကံမကောင်းတာ, အဲလ်ဘတ်ကသူလိုအပ်အံ့သောငှါသတင်းအချက်အလက်အများကြီးမရှိဘဲဤဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ သောကြောင့်မူပိုင်ခွင့်များကြီးမားသော backlog ၏, အဲလ်ဘတ်ပြင်းထန်သောအချိန်ဖိအားအောက်မှာအလုပ်လုပ်နှင့်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အလုပ်သာနာရီ 20 ပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ရပေမည်။ ထို့ပြင်ကြောင့်အဆိုပြုထားတီထွင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, အဲလ်ဘတ်အပြင်ဘက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူတိုင်ပင်ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး (Noveck 2006) ။
ဒီအခြေအနေကိုလုံးဝကျိုးပဲ့အဖြစ်ဥပဒေပါမောက္ခဗက် Noveck လုပ်ကြံလေ၏။ မူပိုင်ခွင့်များအတွက်တစ်ဦးပွင့်လင်းသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ် system အတွက်ခေါ်: "တစ်ဦးကြိုးနှံအဆိုပြုချက်ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်" ဇူလိုင်လ 2005 ခုနှစ်, ဝီကီပီးဒီးယားဖွငျ့ပိုငျးတှငျမှုတ်သွင်းသူမကအမည်ရဘလော့ post ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Office နဲ့ဒီလိုက IBM အဖြစ်ဦးဆောင်နေသည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးနောက်, ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့် 2007 ခုနှစ်တစ်ဦးက 200 နီးပါးနှစ်အရွယ်အစိုးရမဟုတ်သောဗျူရိုကရေစီ၏ဇွန်လအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်များနှင့်ရှေ့နေများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးမဖြစ်နိုင်ရာအရပျတူပုံရသည် ဒါပေမယ့်ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်လူတိုင်း၏အကျိုးစီးပွားဟန်ချက်ညီတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲ။
5.9 ပုံ: ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ။ source: Bestor and Hamp (2010) ။
ဒီနေရာတွင်က (ပုံ 5.9) အလုပ်လုပ်ပုံပါပဲ။ တစ်ဦးတီထွင်သူသူမ၏လျှောက်လွှာ (သူမခဏ၌ပြုအံ့ဘယ်ကြောင့်အပေါ်ထက်ပို) အသိုင်းအဝိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖြတ်သန်းသွားရှိသည်ဖို့သဘောတူပြီးနောက်လျှောက်လွှာ website တစ်ခုမှ posted ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်. လျှောက်လွှာကို (သူတို့ခဏတွင်ပါဝင်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်အပေါ်ကိုထပ်ပို) အသိုင်းအဝိုင်းသုံးသပ်ရေးဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကြိုတင်အနုပညာဥပမာ, တည်ရှိပြီးမှတ်ချက်တွေနဲ့ website တစ်ခုထံ upload ကြသည်။ ဒီဆှေးနှေးခ၏လုပ်ငန်းစဉ်တွေ, သုတေသနနှင့်အပ်လုဒ်တင်ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက်မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူကိုစလှေတျဖြစ်ကြောင်းသံသယရှိကြိုတင်အနုပညာရဲ့ထိပ် 10 ကိုအပိုင်းပိုင်းကိုရွေးဖို့, နောက်ဆုံးမှာမှီတိုင်အောင်, သုံးသပ်ရေးမဲရပ်ရွာတွင်ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူထို့နောက်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကျင်းပ မှစ. မျိုးတူက-to-မူပိုင်ခွင့် input နဲ့ပေါင်းစပ်နေတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ပြန်ဆို။
တစ်ဦးအမေရိကန်မူပိုင်ခွင့် 20070118658 မှတဖန်ပြန်လာသော "User-select လုပ်ပါစီမံခန့်ခွဲမှုတပ်လှန့် format ကို။ " ဒီမူပိုင်ခွင့်ထံ upload ခဲ့ peertopatent.org ကြောင့်စတိဗ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pearson, IBM ကတစ်ဦးအကြီးတန်းဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများကဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာဇွန်လ 2007 ခုနှစ်တွင်။ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pearson သုတေသနဒီဧရိယာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့မတိုင်မီအနုပညာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖော်ထုတ်: နှစ်နှစ်အစောပိုင်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကွောငျး: "လျင်မြန်စွာလမ်းညွှန်အကိုးအ Active ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ" ခေါင်းစဉ် Intel ကနေကို manual ။ ဤစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်အခြားကြိုတင်အနုပညာနှင့်ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှဆွေးနွေးမှုနှင့်အတူလက်နက်ပါ, တစ်ဦးမူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူကိစ္စတွင်၏စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာထုတ်ပစ်, အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့် Intel ရဲ့လက်စွဲ၏ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pearson အားဖြင့်တည်ရှိပြီးခဲ့သည် (Noveck 2009) ။ ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်ပြီးစီးခဲ့ပြီ 66 ဖြစ်ပွားမှု၏နီးပါး 30% အဓိကအားဖြင့်မျိုးတူက--မူပိုင်ခွင့်မှတဆင့်ကိုတွေ့ကြိုတင်အနုပညာအပေါ်အခြေခံပြီးပယ်ချခဲ့ကြသည် (Bestor and Hamp 2010) ။
အဘယျသို့ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်၏ဒီဇိုင်းကိုအထူးသဖြင့်ကြော့စေသည်ကြောင့်အတူတူအားလုံးကခုန်ဖို့အများကြီးကွဲလွဲအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူရရှိသွားတဲ့သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာအစဉ်အလာ, လြှို့ဝှကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သွားမူပိုင်ခွင့်ထက်ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သောကွောငျ့တီထွင်သူဒီပွင့်လင်းမူပိုင်ခွင့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မက်လုံးပေးရှိသည်။ သုံးသပ်ရေး ", junk မူပိုင်ခွင့်" ၏ပေးအပ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မက်လုံးပေးရှိသည်နှင့်များစွာသောလုပ်ငန်းစဉ်ပျော်စရာရှာဖွေရသလိုပဲ။ ကသာ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ထိုမူပိုင်ခွင့်ရုံးနှင့်မူပိုင်ခွင့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မက်လုံးပေးရှိသည်။ ရပ်ရွာပြန်လည်သုံးသပ် process ကိုကြိုတင်အနုပညာရဲ့ 10 မကောင်းတဲ့အပိုင်းပိုင်းတွေ့ရှိလျှင်, ဤအလုပ်အမူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူများကလျစ်လျူရှုထားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော်မှမူပိုင်ခွင့်-Peer နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူအဖြစ်ကောင်းသောသို့မဟုတ်အထီးကျန်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ပွင့်လင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအမြဲကျွမ်းကျင်သူများကိုအစားထိုးမရကြဘူး, တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကျွမ်းကျင်သူများကပိုကောင်းသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပျကိုကူညီပေးပါတယ်။
ရွယ်တူချင်းမှမူပိုင်ခွင့်ကို Netflix နဲ့ဆုနှင့် Foldit ထက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံပေါက်နိုင်ပေမဲ့, ကဖြေရှင်းချက်ထဲမှာအလားတူဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ် generate ထက်စစျဆေးဖို့ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကိုလက်စွဲ "Active စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ: လျင်မြန်စွာလမ်းညွှန်အကိုးအ" ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ကအနည်းဆုံး-မှဤစာရွက်စာတမ်းကြိုတင်အနုပညာကြောင်းအတည်ပြုရန်, အတော်လေးလွယ်ကူ-များအတွက်မူပိုင်ခွင့်စစျဆေးသူဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောထိုလမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်ကိုရှာဖွေတာအတော်လေးခက်ခဲသည်။ Peer-To-မူပိုင်ခွင့်လည်းပွင့်လင်းခေါ်ဆိုခစီမံကိန်းများကိုပင်သိသာအရေအတွက်မှအာမမဖြစ်ကြောင်းတာဝန်များကိုအဘို့ဖွစျနိုငျကွောငျးဖျောပွ။